Gini mere Keywords Google ji zoo ihe di nma maka ndi ahia | Martech Zone
O yiri ka onye ọ bụla ọ na-ebe ákwá ma na-eche banyere Google enyeghi data isiokwu ederede na Nchịkọta. Mgbe m kwenyere na ọ na-ebelata uru nke nchịkọta nwantakịrị, m ga - arụ ụka na ọ bụ nnukwu ọ ga - enyere aka ịre ahịa. Edere m n'oge gara aga na SEO anwuola na m na-ele dị ka ụlọ ọrụ ji nwayọọ nwayọọ na-arahụ. Nke a nwere ike ịbụ ntu ikpeazụ n’ime akpati ozu.
Ọ bụrụ na m nwee obi ụtọ na ya, ọ bụ n'ihi na m. Edere m ya na mkparịta ụka nke ndị ahịa ahịa ahịa anyị, Right Na mmekọrịta:
Ntugharị Google igbochi nsuso nke isiokwu niile na - eme ka ndụ ndị ahịa sie ike, mana ọ gaghị ekwe omume. Ndị na-ere ahịa ga-enwe ike inyocha ọnụọgụ pịa site na iji data Webmaster iji ghọta etu okporo ụzọ organic si emetụta mbọ ahịa ahịa ha na-abata. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, nke a na-aga n'ihu na-eme ka anyị bụrụ ndị ahịa kacha mma. Anyị kwesịrị ilekwasị anya na ide ederede bara uru nye ndị na-ege anyị ntị na ige ndị na-ege anyị ntị - ọ bụghị ịchụ isiokwu, saịtị saịtị, yana ịchọ njikọ iji mepụta ogo ọchụchọ anyị.
Nke a bụ ozi ọma kachasị mma maka azụmaahịa na-enweghị ego iji tinye ego na atụmatụ SEO iji mepụta ọdịnaya bara ụba na weebụ iji wepụta ọkwa nke ọdịnaya ha. Ọtụtụ n’ime anyị enweghị ike ịsọ mpi na ụlọ ọrụ buru ibu na ụlọ ọrụ gbagorola ijeri dọla. Ebe enwere uru ego iji ghọ aghụghọ, ụlọ ọrụ ga-aghọ aghụghọ. Industrylọ ọrụ a na-aghọ aghụghọ ule (na ịghọ aghụghọ ule na ịghọ aghụghọ ule). Ọtụtụ n'ime ndị egwuregwu ahụ bụ aghụghọ banyere atụmatụ ha mana o doro anya na Google abụghị. Google choro ka ahia ahia buru ihe ndi ozo, obughi ndi ulo oru SEO bara ọgaranya nke nwere igbe mkpuchi nde dolla iji kpughee uzo aghụghọ na ndi ahia ha. Mgbanwe Google na-ewute ndị ahụ - ọ bụghị gị.
Ma, ọ bụ ezie na ịnweghị ike ịkọwa otu isiokwu akọwapụtara na atụmanya doro anya, ị ga-enwe ike ịmata onye ahụ rutere n'ụzọ na site na ibe ha mere. Mara isiokwu nke ntinye peeji nke atụmanya gị rutere na saịtị gị ga-enyere gị aka ịmatakwu ọdịnaya nke na-enye uru. Na ime nyocha isiokwu na nyocha asọmpi ka nwere ike kpughee ohere maka ịchọta na ide ederede ndị ọzọ ga-achọta ma baa uru. Nchọpụta njikarịcha bụ ntọala maka atụmatụ ọdịnaya ọ bụla, mana ịde na ịkekọrịta ọdịnaya ka mma (ederede, ederede na anya) ga-eme karịa tweaking aha peeji ma ọ bụ njirisi isiokwu na ibe.
Oghere ahụ enyere n’etiti data Webmaster, data Ọdịnaya, na data Analytics kwesịrị inyere gị aka ime ka ike gị nwee ike mepụta nnukwu ọdịnaya. Kama ịwụli ngalaba isiokwu nke nchịkọta, ị kwesịrị ịbanye n'ime okporo ụzọ site na aha peeji iji ghọta isiokwu ndị na-enye ọtụtụ ụlọ ọrụ gị ụlọ ọrụ. Keywords na-adọpụ uche ma mee ka ọtụtụ ndị ahịa dị umengwụ. Naanị ha ka ha na-ede ihe nzuzu iji mee ka okporo ụzọ ndị ọzọ dabere na isiokwu okwu kama ilekwasị anya na ọdịnaya zuru ezu nke na-adọta uche kachasị.
Enweghị data ọ bụla na-ahapụ oghere n'ime ike gị iji mepụta atụmatụ ọdịnaya dị egwu. Ka nwere ike inyocha data Webmaster iji ghọta isiokwu ndị na-akwọ ọdịnaya kachasị - mana ị nwere ike itinye ya na ọdịnaya nke na-akwalite echiche na ntụgharị. Ghọta ihe gbara ya gburugburu gburugburu isiokwu ị na-ede maka ya nwere ike inye gị nghọta nghọta karịa ihe ewu ewu ma ọ bụ ewu ewu.
Dịka ọmụmaatụ, ilekwasị anya na 'google Keywords adịghị enye' nwere ike iduga m na ntanetị ole na ole gbasara usoro na usoro ndị ọzọ. Kama, m lekwasịrị anya ebe a na otu esi aga enyere ndi ahia aka. Ọnọdụ ahụ ga-emecha bụrụ ihe bara uru na atụmatụ ọdịnaya m karịa ị na-atụgharị mkpokọta isiokwu gburugburu! Ihe gbara gburugburu isiokwu gị kwesịrị ịbụ ihe ị ga - elebara anya!
Ekwesiri ighota na ufodu ndi na enye ihe nyocha bu ndi a. Lelee GinzaMetrics: Njirimara ohuru na GinzaMetrics Platform Adreesị Google's Secure Search (Isiokwu Na-enyeghị) Mmelite.
Tags: Google Analyticsgoogle isiokwuIsiokwu adịghị enyeenyeghị ya
Ọkt 10, 2013 na 8:59 PM
Nke a na echetara m tracker nke isiokwu Raven na-emechi otu afọ gara aga. The SEO Ihọd nri gafee m table nwere ụfọdụ mara mma Atụmatụ m na saịtị. Otu gbadoro anya na iche ebe ekwuru ya, ozugbo okwu ọchụchọ sitere na Webmaster na-achọta ụzọ ha na saịtị gị na usoro ihe eji eme ihe, mgbe ahụ usoro atụmatụ akara gị na-arụ ọrụ. Ebe ọ bụ na anyị na-ewepụ okwu ọchụchọ na nchịkọta si na nchịkọta, enwere ihe ngwọta dị na nke a.
Ọkt 11, 2013 na 12:41 AM
Daalụ maka post a. Wepụta oge iji ghọta nkenke ma nyochaa ahịa ọdịnaya yana ị nwere ike ịchọpụta ụzọ ndị a na-atụghị anya ya iji kpalite ezigbo azụmaahịa.
Enwere m ezigbo obi ụtọ ịgụ ya .. Nkọwa dị ukwuu .. Daalụ maka ịkekọrịta!
Ọkt 15, 2013 na 9:58 AM
Ekwenyere m na 100%. A mụrụ SEO site na egwu ma ghara ịghọta ahịa dijitalụ. Google na-ahazi ebe egwuregwu. Nke a bụ mmalite ahịa ịmaliteghachi na ịntanetị ahịa. E nwere 1000s nke ụlọ ọrụ SEO ndị dịkarịrị ala na ndị ahịa kacha mma. Mana ha na-ekwupụta onwe ha dị ka ndị ọkachamara SEO. SEO na-ere ahịa. SEO abụghị usoro dị elu dị elu nke naanị ndị ọkachamara tozuru etozu nwere ike isi. Ọ dị ka a ga-amanye ụlọ ọrụ SEO niile ịmụ ahịa 101.
Jan 19, 2014 na 11: 27 AM
Ee n'ezie! Kama ịmeta ngalaba isiokwu nke isiokwu nyocha, anyị kwesịrị ịwụnye okporo ụzọ site na aha peeji iji mata isiokwu ndị na-enye ọtụtụ ụlọ ọrụ anyị ụlọ ọrụ. M na-eche na isiokwu mere ka ụfọdụ ndị ahịa dị umengwụ. Offọdụ n'ime ha na-ede naanị "ihe nzuzu" iji mee ka okporo ụzọ ndị ọzọ dabere na isi okwu kama ilekwasị anya na ọdịnaya niile dị ezigbo mkpa.
Jan 21, 2014 na 11: 55 AM
Ee data kwesịrị inye aka mee ka ike ịme ọdịnaya dị ukwuu. Site na peeji nke ọdịda anyị nwere ike itinye uche na ihe ndị ọbịa na-ahụ / chọta na saịtị anyị.